MD Farmaajo oo lagu eedeeyay in uu baalmaray Dastuurka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 14 August 2018
Xisbiyada Wadajir, Kulan, Daljir, iyo Kutlada Horusocod waxay walaac xoog leh ka muujinayaan ku tumashada joogta ah ee laanta fulinta ee uu hogaanka u yahay Madaxweyne Farmaajo kula kacayso dastuurka kmg ah ee Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya.
Halkii uu madaxweyne Farmaajo ka ilaalin lahaa Dastuurka iyo mabaadi’da asaasiga ee lagu dhisay, wuxuu ka doortay ku tumashada xuquuqda aas aasiga ah ee Muwaadinka Soomaaliyeed, ku takrifalka hantida qaranka, dilal sharciga ka baxsan, dhismaha maleeshiyaad sharci daro ah , iyo magacaabis Gudoomiyaha iyo garsoorayaasha Maxkamade Sare si sharciga khilaafsan. Talaabooyinkaas oo idil ma aha oo keli ah ku xdgudub Dastuurka iyo tix gelin la’aan saraynta sharciga dalka, ee waxay dhaawacayaan kalsoonida uu muwaadinku ku qabo dawladnimada iyo hay’adaha dawliga ah.
Ku tumashada Dastuurka iyo Sharciga iyo ku tagrifalka awooda dawladnimo iyo hantida qaranka waa sababta keentay colaada Soomaaliya. In adeegsiga awooda dawladnimo lagu xakameeyo xayndaabka dastuurka iyo sharciga, waxay lafdhabar u tahay dhismaha nabadda iyo dawladnimada iyo soo celinta kalsoonida uu muwaadinka ku qabo hay’adaha dawladiga ah.
Madaxbanaanida Garsoorka waxay lama huraan u tahay isku dheelitirka awoodaha dawlada iyo ilaalinta xuquuqda muwaadinka. Hadii uusan garsoorku madaxbanaanayn waxaa halis loogu jiraa isku milanka awoodaha laanta fulinta iyo Garsoorka, taasoo halis ku ah nidaamka dimoqoraadiga iyo xoriyada iyo xuquuqda muwaadinka.
Madaxweynuhu wuxuu jebiyey qodobka 126 ee Dastuurka kadib markii uu dhisay ciidan loogu yeeray (Ciidanka Difaaca Shacabka) kaa soo lagu bedelay ciidankii hay’adda Nabadsugida ee la kala diray.
Ujeedka loo dhisay ciidanka Difaaca Shacbiga ayaa ah in loo adeegsado caburinta codka mucaaradka iyo cidii loo arko in ay laanta fulinta ka aragti duwan tahay. Waxaa taas la mid magacaabista Gudoomiyaha iyo Garsoorayaalka Maxkamada Sare oo ka hor imaanaya sharciga tirsigiisu yahay 28, gaar ahaan qodobada 5a sidoo kale qodobka 111a ee Dastuurka.
Madaxweynaha isagoo ku dhuumanaya dib u habaynta Garsoorka ayuu si khilaafsan dastuurka iyo
sharciga Garsoorka wuxuu magacaabay Gudoomiyaha iyo Garsoorayaasha Maxkamada Sare.
Talo soo jeedin ka timaada Gudiga Adeega Garsoorka ayuu Madaxweynaha ku magacaabi karaa Gudoomiyaha iyo Garsoorayaasha Maxkamada Sare ee soo buuxiya shuruudaha uu dhigayo sharciga Garsoorka, markaa ka dibna waa in uu Baarlamaanku ansixiyo. Maadaama uusan jirin Gudiga Adeega Garsoorka,
magacaabista Madaxweynaha ee Gudoomiyaha iyo Garsoorayaalka Maxkamada Sare waxay baal marsan tahay Dastuurka iyo sharciga Garsoorka, waxayna sababaysaa xasarad siyaasadeed oo dalka dib ugu celisa xiligii ku meel gaarka ahayd.
Dhismaha maleeshiyaadka ka baxsan xayndaabka ciidanka qaranka, magacaabista Gudoomiyaha iyo garsooyaalka Maxkamada Sare si khilaafsan dastuurka iyo sharciga, Xil ka tuuristii Gudoomiyaha Baarlamaanka waxay tilmaam ka yihiin damaca Madaxweyne Farmaajo ku doonayo nidaam kaligii talisnimo, kaa soo lidi ku ah hanaanka dimoqoraadiga ah ee saraynta sharciga iyo awooda Shacabka ku dhisan Haddaba Xisbiyada Wadajir, Kulan, Daljir iyo Kutlada Horusocod waxay ka xunyihiin gaboodfalka iyo ku xadgudubka joogtada ah ee Dastuurka ee uu Madaxweyne Farmaajo ku kacayo, waxayna ugu baaqayaan Baarlamaanka in uu qaado talaabooyin uu ku burinayo go’aanada sharci darida ah ee ay laanta fulinta meelmarisay si loo soo meelmariyo isla xisaabtan loona soo celiyo kalsoonida muwaadinka iyo aaminaada Shacabku ku qabaan dawladnimada
DAAWO:-Trump Oo Laga Duubay Cajal Kale Oo Qarsoodi Ah